Sivana fanontam-pirinty vy tsy misy fangarony ho an'ny mpanamboatra indostria manitra sy orinasa | Manfre
Sivana fanaovan-gazety tsy manara-penitra ho an'ny indostrian'ny ranomanitra
Gazety fanasiana vy tsy misy fangarony, fantatra amin'ny anarana hoe press sivana any amin'ny laboratoara na takelaka vy sy sivana volo.
Ny fampiatoana dia alefa ao anaty efi-trano sivana mihidy ao amin'ny milina fanivanana. Eo ambanin'ny hetsiky ny tsindry miasa, ny filtrate dia mandalo ny sivana membrane na fitaovana sivana hafa ary alefa amin'ny alàlan'ny fivoahan'ny rano. Ny sisan-tsivana dia tavela ao anaty frame mba hamoronana mofomamy sivana, amin'izany Hatramin'ny fisarahana ranoka matevina.
Toetra mampiavaka ny mekanika
1. Ny milina fanontam-pirinty vy dia vita amin'ny 1Cr18Ni9Ti na 304, 306 fitaovana vy tsy misy fangarony avo lenta, izay mahazaka harafesina ary maharitra. Ny takelaka sivana dia mandray rafitra misy kofehy. Ny fitaovana sivana isan-karazany dia azo soloina arakaraka ny vokatra samihafa an'ny mpampiasa (ny fitaovana sivana dia mety ho membrane microporous, taratasy sivana, lamba sivana, tabilaon'ny fanazavana, sns.), Ny peratra famehezana dia mandray karazana silica gel sy fingotra fluorine (asidra sy alkali mahatohitra ), tsy misy famoahana, fampisehoana famehezana tsara.
2. Ny takelaka sy ny sivana misy ny membrane microporous dia fitaovana tsara kokoa hanivanana ny gazy sy ny poti-pototra ao amin'ny indostrian'ny simika, ny fanafody ary ny sakafo, miantoka 100% tsy misy karbaona, mikoriana goavambe ary mora fanaparitahana.
3. Famokarana indray miaraka amin'ny takelaka misy tanjona maro sy sivana bika (fanivanana dingana roa), fampidirana ranon-javatra indray mandeha, hahatratrarana ny fanivanana semi-précision an'ilay ranoka voalohany, filtration tsara (misy karazany maro koa ny sivana haben'ny pore. fitaovana hamahana ny tombony amin'ny takiana samihafa).
4. Arosoy amin'ny rano tsindrona ilay sivana alohan'ny hampiasana azy, alemana amin'ny rano namboarina ilay sivana ary apetaho eo amin'ny efijery, avy eo potsero ny pre-plate, fenoy ny rano ao anaty paompy alohan'ny hanombohany, avy eo manomboka, ary esory ny rivotra, voalohany rehefa manidy Mikatona ny fidiran'ny ranon-javatra ary akombony indray izy mba tsy hivezivezy any aoriana ilay ranoka ary hanimba ny sivana rehefa mijanona tampoka.
5. Ny paompy sy ny faritra ampidirin'ity milina ity dia mifandray amin'ny alàlan'ny fanangonana haingana, izay mora esorina sy hadio.
Teo aloha: Manalefaka fitaovana amin'ny rano amin'ny fitsaboana rano
Manaraka: Sterilizer ultraviolet ho an'ny fitsaboana rano
Filtration rivotra indostrialy ho an'ny Donal fanoloana ...